Ikhaya elimangalisayo eMeslan elinamakamelo okulala ama-3
U-Novasol unokuphawula okungu-332 kwezinye izindawo.
Leli tshe elivuselelwe kabusha elakhiwe ngendlu yamaholide yaseBreton libanzi futhi liyasebenza futhi libekwe endaweni ethule. Inekhishi elikhulu kanye nendawo yokuphumula / yokudlela enamafasitela aseFrance anikeza imibono kulo lonke ipulazi lendawo.
Izici eziningi zangempela zigciniwe, kufaka phakathi imishayo, umsebenzi wamatshe oveziwe kanye neziko. Le ndawo ingaphakathi kwamamayela angama-28 (45km) olwandle oluhlukahlukene lwase-Southern Brittany.
Indawo yasemaphandleni inamasonto amahle, imifula nehlathi. Endaweni, i-Plouay iyisikhungo samabhayisikili esidume umhlaba wonke, futhi i-Le Faouët inendawo yemakethe yenkathi ephakathi.
Izitolo 1 mile kanye beach 25 miles (40km).
Leli tshe elivuselelwe kabusha elakhiwe ngendlu yamaholide yaseBreton libanzi futhi liyasebenza futhi libekwe endaweni ethule. Inekhishi elikhulu kanye nendawo yokuphumula / yokudlela enamafasitela aseFrance anikeza imibono kulo lonke ipulazi lendawo. Izici eziningi zangempela zigciniwe, kufaka phakathi imishayo, umsebenzi wamatshe oveziwe kanye neziko. Le ndawo ingaphakathi kwamamayela angama-28 (45km) olwandle oluhlukahlukene lwase-Southern Brittany. Indawo yasemaphandleni inamasonto amahle, imifula nehlathi. Endaweni, i-Plouay iyisikhungo samabhayisikili esidume umhlaba wonke, futhi i-Le Faouët inendawo yemakethe yenkathi ephakathi. Izitolo 1 mile kanye beach 25 miles (40km).
Amabanga: ithuba lokudoba 3 km / ukuyothenga 1.6 km / indawo yokudlela 10 km / amanzi (Ulwandle / olwandle olunesihlabathi) 40 km